कालजयी गीतका गीतकार देव वज्राचार्यको मृत्यु पछि पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्यो अपमान, पार्थीव शरिरका लागि समेत प्रतिष्ठानले ठाउं दिएन (भिडीयो सहित)। « Light Nepal
कालजयी गीतका गीतकार देव वज्राचार्यको मृत्यु पछि पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्यो अपमान, पार्थीव शरिरका लागि समेत प्रतिष्ठानले ठाउं दिएन (भिडीयो सहित)।
Published On : 14 September, 2017 2:37 pm
काठमाडौं, २९ भदौ । कालजयी गीतका गीतकार देव वज्राचार्य अब हामी माझ रहेनन् । उनको काठमाण्डौको वयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधवार निधन भएको छ ।
कला, साहित्य, संगीत तथा कलाकारितामा जीवन समर्पण गरेकाहरुको निधन भएपछि उनीहरुको पार्थीव शरिर काठमाण्डौको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखेर श्रद्धाञ्जली दिने प्रचनल छ । तर वज्राचार्यका लागि प्रतिष्ठानले ठाउं उपलब्ध नगराएपछि उनका शब विहिवार श्रद्धाञ्जलीका लावि टेकु दोभानमा राखिएको थियो ।
श्रद्धाञ्जलीका लागि कला, साहित्य र संगीतमा लागेका साधकहरु टेकु दोभान पुगेका थिए । संगीत प्रवर्तक प्रकाश सायमी, संगीतकार न्यु वज्राचार्य, साहित्यकार मुरारी सिग्देल, संगीतकार सुरेश अधिकारी लगायत श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका हुन् ।
देव वज्राचार्य चर्चित संगितकार न्यु वज्राचार्यका काका हुन् । उनले प्रतिष्ठामा मर्मतको काम भएका कारण श्रद्धाञ्जलीका लागि देवको मृत सरिर त्यहां राख्न नमिल्ने प्रतिकृया प्रतिष्ठानले दिएको बताए ।
तर प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतिले भने प्रज्ञा भवन अरु नै कार्यक्रमका लागि बुक भैसकेकाले श्रदाञ्जलीका लागि शव राख्न नमिल्ने बताएको जानकारी प्रकाश सायमीले दिएका छन् । “हाम्रो हलमा कार्यक्रम छ गेट खोल्न समस्या हुन्छ मिल्दैन भनेर कुलपतिले भनेकाले टेकु दोभानमा राख्नु पर्यो सायमीले भने । कुलपति उप्रेतिले शव राख्न निवेदन दिनुपर्ने समेत बताएको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं ओमबहालमा २००९ साल फागुन १४ गते जन्मिएका वज्राचार्यको उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको थियो । वज्राचार्यको श्रीमती, एक छोरा र तीन छोरी छन् ।
वज्राचार्यको रचनामा अरुणा लामा, मिरा राणा, मधु क्षेत्री लगायत कलाकारले स्वर तथा संगीत दिएका छन् । एक्लै बस्दा सधैं मलाई सम्झना तिम्रो आइदिन्छ, प्रिय तिम्रो मुहारमा हासो मैले कहिले देखिन, मेरो आँखाबाट झरेको आँशु, एउटा गीत रचेको छु तिमीले नै गाइदिनु, केही दिनमा नै तिमीसँग गहिरो प्रिती बस्यो, किन मलाई यति चाँडै छोडी तिमी गयौ, लगायतका कालजयी गीत हुन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वज्राचार्यको पार्थीव शरिर राख्न नदिएको विषयमा केही संगीत पारखी तथा कलाकारले चर्काविरोध गरेका छन् ।
नायीका शुष्मा कार्कीले आफ्नो फेसवुक स्टाटसमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सो कदमको घोर भत्र्सना गरेकी छन् । उनले आफ्नो फेसवुक स्टाटसमा लेखेकी छन् ।
प्रज्ञाप्रतिष्ठान का कुलपती को बडो दुख को साथ घोर भत्सर्ना गर्दछु!!!! सुगम सङित का गितकार, कवि, समाजसेवि देब बज्राचार्य को पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली को लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठान को प्राङ्गणमा राख्न न दिएकोमा असाध्यै दुख लागेको छ ! किन र कसरी दिन मिलेन ? जुन ठाउ श्रष्ठाको लागि हो र अन्तिम श्रद्धाञ्जली को लागि पनि स्थान दिदैन भने किन चाहियो प्रतिष्ठान ? बांच्दा त सम्मान पाउदैनन, तर मरेर जादैगर्दा पनि किन अपमान ???हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु देब बज्राचार्य प्रती उहाँको आत्मालाइ सान्ती मिलोस ।
त्यस्तै प्रकाश सायमीले लेखेका छन्
कानले सुनेको कुरा हृदयले बुझ्नुपर्छ , तर हृदयले नबुझेको कुरा जति सुने पनि काम छैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानक पूर्व कुलपति मदनमणी दीक्षितले चलचित्र नायिका नवीना श्रेष्ठको निधन हुँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उनको पार्थिव शरीर राख्न नदिँदा कलाकारले पर्खाल चढेर इँटा हानेका थिए । त्यस्तै घटना आज हुन सक्थ्यो तर अहिलेका कुलपति भनाउँदो चिनीयाँ झोलाले गीतकार देव बज्राचार्यको पार्थिव शरीर प्रज्ञा प्रतिष्ठान राख्न नदिँदा ।
तर गीतकार बज्राचार्यको परिवारले हामीलाई त्यस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिएनु भने पछि आज उहाँको श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम टेकु दोभानमा हुँदैछ, विहान १० बजे । किन भाषाविद् कृष्णप्रसाद पराजुली, संगीतकार रत्नवहादुर खड्गीले मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान मरे पनि नलानूभनेका रैछन् आज बल्ल बुझियो ।